‘अल्लाहले बुझेको छ, यो साल हामी संकटमा छौँ’ - Bibechana Bibechana
१५ बैशाख २०७७ १७:३० ||
तीर्थ तिम्सिना, बिष्णु लामिछाने
बुधवारे। अघिल्लो बर्षको रोजामा झापा बुद्धशान्तिका ६७ बर्षिय मोहम्मद उजिर घर नजिकको नुरि जामे मस्जिदमा पाँच पटकसम्म नवाज पढ्थे । २५–३० जनाको टोलीमा नवाज पढ्दा उनलार्ई छुट्टै आनन्द हुन्थ्यो । तर यो बर्ष विश्वब्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण उनी घरमै बसेर नवाज पढ्दै छन् ।
सामुहिक रुपमा नवाज पढ्दा अल्लाह खुशी हुने मोहम्मद उजिरको बिश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘घरमा एक्लै बसेर के नवाज पढ्नु ? यस्तो जिन्दगी बाँच्नु भन्दा बरु मरेकै बेस ।’ उजिर मात्रै होइन, सोही ठाउँका ३५ बर्षिय महोम्मद नजिव पनि यतिबेला मस्जिदको अगाडि बसेर बिगतका बर्षहरु सम्झिदै छन् ।
बिहानै उठेर आजान सुनेर उनी मस्जिद जान्थे र दिनभर केही नखाई रिकात पढेर बस्थे । ‘घरमा बसेर कति रिकात गर्ने ? मस्जिदमा जस्तो खुशी कहाँ छ ?’ मोहम्मद आफ्नो पीडा सुनाउँछन् । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा करिब ३५ घर मुिस्लम परिवार छन् । बन्दाबन्दीका कारण यतिबेला उनीहरु घरैमा बसेर निराहर रही नवाज पढ्दैछन् ।
कोरोनाबाट यो बर्ष बाँचे अर्को बर्षबाट खुसी साथ रोजा बस्न पाइने कुरामा उनीहरु ढुक्क छन् । महोम्मद् नजिव भन्छन्, ‘यसबर्ष रमजान सुनसान र खल्लो भए पनि कोरोना सकिएपछि हामी मस्जिदमा गएर अल्लाहलाई पुकार्ने छौँ, हामीलाई संकट परेको उसले बुझेको छ ।’
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण देशभर बन्दाबन्दी छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान् पर्व रमजान शनिबारदेखि शुरु भएको छ । एक महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा मुसलमान दिनमा निराहार बस्छन् । मुसलमान समुदायले बिहान ३ः४३ बजेबाट बेलुका ६ः३६ बजेसम्म निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ । शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोजा बस्नुपर्ने उनीहरुको मान्यता रही आएको छ ।
रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै समयतालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ । रमजान महिनामा मुसलमानको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुको विश्वास छ । दान दिनु, गरीब र दीन दुःखीलाई सेवा गर्नु तथा जकात निकाल्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता समेत हो । त्याग, तपस्या र बलिदान सबै जोडिने यो पर्वमा मुसलमान रोजा बस्नुलाई गर्व मान्दछन् ।
नाबालक, बिरामी, घातक रोग लागेका र गर्भवती महिलालाई भने रोजा बस्न अनिवार्य नभएको नुरी जामे मस्जिदका शिक्षक महमद फरिदुल हसन बताउँछन् । उनी बिगत तीनबर्षदेखि उक्त समुदायका करिव ३० जना बालबालिकालाई पढाइरहेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएका सो समुदायका केही स्थानीयहरुले राहत लिएरै भए पनि घरमै रोजा बस्दै आएका छन् ।